ခေါငျးလောငျးထိုးသံ ဘယျသူ့ထံ – Kyaw Zaw Oo's Blog
September 23, 2016 February 25, 2019 kyaw zaw oo
By ကျော်ဇောဦး ၊ (၂၃/၀၉/၂၀၁၆)
၂၀၁၂-ခုနှစ် ပြီးခဲ့တဲ့လေးနှစ်ကျော်ကာလက ဂွမြို့ရဲ့ မြို့ခန်းမထဲမှာ ရခိုင်စာရေးဆရာ သုံးယောက်နဲ့ စာပေဟောပြောပွဲတစ်ခုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆရာတော် အသျှင်ပညာစာရ၊ ကျွန်တော် ကျော်ဇောဦး နဲ့ ဆရာ မောင်လှိုင်(လမု) တို့ ဟောပြောခဲ့ကြပါတယ်။
စာပေဟောပြောပွဲည ပြီးတော့ နောက်တစ်နေ့ နေ့လယ်စာကို ဂွမြို့ပြင်တစ်နေရာက အဝေးပြေး လမ်း ပေါ်မှာရှိတဲ့ အိမ်ဆိုင်ကလေးဖွင့်ထားတဲ့ အန်အယ်ဒီခေါင်းဆောင် ဦးညီပု (ယခု ရခိုင်ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ်) တို့ မိသားစု ရဲ့ အိမ်ကုပ်ကုပ် ကလေးမှာ ရိုးရှင်းလှတဲ့ ရိုးရာ ထမင်းဟင်းအား အိမ်သား တွေက မေတ္တာ စေတနာ အပြည့်နဲ့ ထည့်ချက်ထားတာကို စားခဲ့ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့က ဆရာမောင်လှိုင်(လမု) က (တစ်ချိန်က)အန်အယ်ဒီ အမာခံတွေ ဆိုတော့ ဆရာမောင်လှိုင်(လမု) ကို အကြောင်းပြုပြီး ထမင်းဖိတ်ကျွေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဆိုတဲ့လူက စကားနည်းသလောက် ဦးညီပုက နှုတ်ဆိတ်တတ်ပုံရလေတော့ ကျွန်တော်မှတ်မိသလောက်ဆိုရင် တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် စကားတောင် မပြောဖြစ်ခဲ့ဘူးလေလား လို့တောင် ထင်မိတယ်။ ပြုံုးပြ၊ ထမင်းကို လက်ဆေးစား၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ နှုတ်ဆက်ပြီး ပြန်လာခဲ့တယ် ထင်တာပါပဲ။ ဦးညီပုရဲ့ ဇနီးနဲ့ သမီးက ဖော်ဖော်ရွေရွေနဲ့ လိုလေသေးမရှိစေရ ဧည့်ခံကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ အဓိကပြောချင်တာက အဲသည်အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး။ အဲသည် စာပေဟောပြောပွဲမှာ ကျွန်တော် ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေထဲက တစ်ခုကို ထုတ်နှုတ် ပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်။
အဲသည် ဟောပြောချက်ရဲ့ တစ်နေရာရာမှာ ရာဇ၀တ်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကို လူ့အဖွဲ့အစည်းက (ကြေအေးမှုကို လက်မခံဘဲ) ဘာကြောင့် တရားစွဲအရေးယူရသလဲ ဆိုတာကို အကြောင်း အလျင်းသင့်လို့ ထည့်ပြောဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ မှတ်မိပါတယ်။ တစ်ခြားအကြောင်းအရာ တစ်ခုကို ပြောပြ ရင်းနဲ့ အဲဒါကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဥပမာ ဆိုကြပါစို့။ လူတစ်ယောက်ဟာ နောက်လူတစ်ယောက်ကို သတ်လိုက်တယ် ဆိုပါစို့။ အဲသည်အခါမှာ အသတ်ခံရသူရဲ့ မိသားစုက ပြီးသွားတာ ပြီးပါစေတော့ ငါတို့သားလေးလည်း ပြန်ရှင် လာတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး ဆိုပြီး ကြေအေးချင်တယ် ဆိုတိုင်း ကြေအေး လို့ မရပါဘူး။ ပြစ်မှု ကျူးလွန်သူဟာ လူသတ်မှုကို ကျူးလွန်ရုံမျှမက မိမိတို့ အသက်ရှင်ရာ လူ့အဖွဲ့အစည်းကိုလည်း ခြိမ်းခြောက်လိုက်တဲ့ လုပ်ရပ်ကို တစ်ပြိုင်တည်းလုပ်လိုက်ရာ ရောက်ပါတယ်။ ဒီလူဟာ လူသတ်တာ သက်သက် မဟုတ်ဘူး၊ . . . ငါတို့အားလုံးကို မထီမဲ့မြင်လုပ်လိုက်တာလည်း ဖြစ်တယ်၊ . . . ဒီလူကို ငါတို့ အရေးမယူရင် ငါတို့အထဲက နောက်တစ်ယောက်ယောက် ဒီလိုမျိုးကျုးလွန်တာကို သူ့လက်ချက် နဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် သူ့လိုလူလက်ချက်​နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ငါတို့ခံလာရနိုင်တယ်၊ . . . သူ့ရဲ့လူသတ်မှုဟာ ငါတို့ အားလုံးကို ခြိမ်းခြောက်လိုက်တာပဲ ဖြစ်တယ် . . . ဆိုပြီးတော့ လူ့အဖွဲ့အစည်းက သဘောထားပါ တယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ဒီလိုပြစ်မှုမျိုးတွေမှာ ကျူးလွန်ခြင်းခံရသူ (victim) ကိုယ်တိုင်ကပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျူးလွန်ခြင်းခံရသူရဲ့ မိသားစုကပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကြေအေးချင်တယ် ဆိုတိုင်း လူ့အဖွဲ့အစည်းက ခွင့်လွှတ်လို့မရပါဘူး။ လူတစ်ယောက်ကို သတ်လိုက်တာဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ကျူးလွန်သူရဲ့ နောင် ထပ်ဆင့် ကျူးလွန်လာနိုင်ခြေ နဲ့ အခြားသူများကလည်း အလွယ်တကူ ကျူးလွန်လာနိုင်မယ့် အလားအလာကို မျှော်တွေးပြီး လူ့အဖွဲ့အစည်းအကျိုးအလို့ငှာ မဖြစ်မနေ အရေးယူဖို့ရာ စွဲချက်တင် တရားစွဲရပါတယ်။
ဒီလူသတ်မှုအတွက် လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ကိုယ်စား နိုင်ငံတော် (the state) က တာဝန်ယူ တရားစွဲရပါ တယ်။ နိုင်ငံတော်ရဲ့ ကိုယ်စား နိုင်ငံရဲ့အစိုးရ (the government) က တရားစွဲရတယ်။ အစိုးရက ထပ်ဆင့် ခိုင်းစေတဲ့ တရားဥပဒေသက်ရောက်စေမှု (law enforcement) ဆောင်ရွက်ရာ အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခု – ဥပမာ ရဲတပ်ဖွဲ့၊ အဲသည် ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုယ်စား ရွာက ရဲစခန်းမှူး က တရားစွဲရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲသည် တရားစွဲတဲ့ ရဲအရာရှိဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်းကိုယ်စား နိုင်ငံကိုယ်စား ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကို တရားစွဲရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
လူတစ်ယောက်ကို သတ်လိုက်တာဟာ လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ကို သတ်လိုက် တာဖြစ်တဲ့အတွက် (အဲသည်လူ တစ်ဦးတည်းကိုသာမက လူ့အဖွဲ့အစည်းအပေါ် ကျူးလွန်ရာ ရောက် တဲ့အတွက် ၊ တစ်နည်းအားဖြင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းကိုလည်း သတ်ရာရောက်တဲ့ အတွက်) ကြေအေး ပြေငြိမ်း အမှုရုပ်သိမ်းလို့ မရနိုင်ပါဘူး။ လူသတ်မှုနဲ့ အခြား အမှုကြီးတွေမှာ ကြေအေးပြေငြိမ်း အမှု ရုပ်သိမ်းလို့ မရတာဟာ ဒီအခြေခံအတွေးအခေါ် (concept) နဲ့ တည်ဆောက် ထားတဲ့ စနစ်ဖြစ်ပါ တယ်။
ဒီသဘောကို ၂၀၁၂ ဂွမြို့ စာပေဟောပြောပွဲ မှာ ကျွန်တော်ပြောဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီကနေ့ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အင်းဝအပ်ချုပ်ဆိုင်ကိစ္စမှာ ကော့မှူးမြို့နယ်က (ကရင်လား ဗမာလား မသိ ရတဲ့) လူမမယ်မိန်းကလေးနှစ်ဦး ကျွန်ပြုနှိပ်စက်ခံရတဲ့အခါ ကျွန်တော်အပါအ၀င် လူ့အဖွဲ့အစည်း တစ်ရပ်လုံးရဲ့ နှလုံးသားမှာ နာကျင်ပါတယ်။ တရားမျှတမှုကိုမရတဲ့အခါ လူ့အဖွဲ့အစည်းဟာ ဒေါသ ထွက်ပါတယ်။ ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်တဲ့ တရားမျှတမှုကို တောင်းဆိုကြပါတယ်။ လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်က ကြားဝင်ညှိနှိုင်းပေးလို့ ငွေ သိန်းငါးဆယ်နဲ့ ကြေအေးလိုက်ရမယ့်​ကိစ္စမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။
ရာဇ၀တ်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်လာရင် လူ့အဖွဲ့အစည်းက ခံယူဆောက်တည်ထားတဲ့ အခြေခံ သဘောထား (concept) လေးကိုတောင် နားမလည်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင် က လက်ရှိအဖွဲ့ဝင်တွေ ဖြစ်ကြတဲ့ အသက်ကြီးရင့်သူ ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဆိုရင် ဒီဥပဒေ အခြေခံသဘောထား (concept) ကို နှလုံးသားထဲကနေ သိနေကြတဲ့ သတင်းထောက်လူရွယ်တွေရဲ့ မေးခွန်းတွေအောက်မှာ မရှုနိုင်မကယ်နိုင် ဖြစ်ကြရပါတယ်။ အလဲလဲအကွဲကွဲ ကျရှုံးတဲ့ သူတို့ရဲ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ သူတို့ဟာ လူ့အခွင့်အရေးကိုကာကွယ်သူ (champion of human rights) တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ရာ လိုအပ်တဲ့ နှလုံးသားတွေလည်းမရှိကြောင်း၊ အလုပ်ရဲ့သဘောသဘာဝက တောင်းဆိုတဲ့ ပညာရှင်ပီသတတ်ပွန်မှု (professional competency) လည်းမရှိကြောင်း ပေါ်လွင် သွားခဲ့ပါတယ်။
အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြကို အဲသည်နေ့က သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ အရှက်တကွဲ ဖြစ်ကြတဲ့အထဲမှာ မမြင်လိုက်ရပါဘူး။ အိမ်အကူ ကလေးတွေ ခံစားခဲ့ရတာတွေ (နဲ့ မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်း ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာ) ကို ငွေကျပ် သိန်းငါးဆယ် နဲ့ ချိန်ခွင်လျှာမျှနိုင်တယ် လို့ အတွေးရောက်တတ်သူ တွေရှိ နေတဲ့အတွက်၊ ရခိုင်လူမျိုး(နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာ) ကိုလည်းပဲ သိန်းငါးဆယ် လိုမျိုး ပေါပေါလောလောတစ်ခုနဲ့ အချိန်အတွယ်ညီမျှမှုရှိတယ် လို့ အတွေးမရောက်ကြဖို့ရာကို မျှော်လင့် ဆုတောင်းရပါတယ်။ ဆရာကြီး ဦးဝင်းမြဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာလေ့လာရေးကော်မရှင်ရဲ့ အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပေသကိုး . . ။
အိမ်အကူ ကလေးတွေအတွက် တရားမျှတမှုရရှိဖို့ရာ ​ဆောင်​ရွက်​သူ Myanmar Now က သတင်းသမား ကိုဆွေဝင်းရဲ့ ဂုဏ်ရည်နှစ်ခုကို မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ပထမဂုဏ်ရည်က taking sides တစ်ဘက်ဘက်မှာ ရွေးပြီး ရပ်တည်တာ၊ အဖိနှိပ်ခံတွေဘက်က ရပ်တည်တာ။ ဒုတိယဂုဏ်ရည်က Going out of his way to help somebody ကူညီနိုင်ဖို့အတွက် ကရိကထခံအားထုတ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲသည် ဂုဏ်ရည်တွေ၊ အဲသည် ဂုဏ်ရည်တွေကို ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ နှလုံးသားမျိုးတွေကို လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် လူကြီးတွေမှာ မရှိကြတာကို ၀မ်းနည်းစဖွယ်တွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။
အိမ်အကူ ကလေးတွေရဲ့ ကောမှူးမြို့နယ်ကို ကျွန်တော်တစ်ကြိမ်ရောက်ဖူးပါတယ်။ ၂၀၁၂ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင်တစ်ရက်နေ့မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ ကော့မှူးမြို့နယ်ထဲမှာ ကျွန်တော် ရှိနေခဲ့တယ်။ မဲပေးတဲ့နေ့ နောက်တစ်ရက်မှာ ရန်ကုန်ကိုရောက်တယ်။ အဲသည်နေ့ ညကားနဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ် တောင်ကုတ်မြို့ကို သွားပါတယ်။ အဲသည်မှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နေရာပေါင်း နှစ်ဆယ်ကျော် ဟောပြောတဲ့ စာပေဟောပြောပွဲခရီးစဉ်ကို စပါတယ်။ ရမ်းဗြဲ၊ ကျောက်ဖြူ၊ တောင်ကုတ်၊ သံတွဲ၊ ဂွ မြို့နယ်တွေထဲက နေရာပေါင်း နှစ်ဆယ်ကျော်မှာ ဟောပြောခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံး ဟောပြောတာကတော့ အခုနကပြောခဲ့တဲ့ ဂွမြို့ထဲက မြို့ခန်းမမှာ ဟောပြောခဲ့တဲ့ပွဲ ဖြစ်ပါ တယ်။ အဲသည် ဂွမြို့ဟောပြာချက်ထဲမှာ ရှေ့ကပြောခဲ့တဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းက ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကို မဖြစ်မနေ အရေးယူရတဲ့ သဘောတရားကို ထည့်သွင်းပြောပြဖြစ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ယောက်ယောက်အပေါ် ရာဇ၀တ်မှု ကျူးလွန်တာဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်လုံး အပေါ် ကျူးလွန်တာဖြစ်တယ်လို့ သဘောထားတဲ့အတွက် ဒီရပ်တည်ချက်ကို အခြေခံပြီး မကြေအေးစတမ်း အပြစ်ပေးရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆယ့်ခြောက်ရာစု အင်္ဂလိပ်ကဗျာဆရာကြီး ဂျွန်ဒုန်းရဲ့ နာမည်ကြီးကဗျာ No man is an island မှာ ပြောထားတယ်။ လူတိုင်းဟာ (ကမ္ဘာ့)တိုက်ကြီးရဲ့ အပိုင်းအစလေးတွေလိုပါပဲတဲ့ . . . ၊ မြေတစ်စ ပဲ့ကျလို့ ပင်လယ်ထဲကို ရောက်သွားရင် တိုက်ကြီးဟာ နည်းပါး ပါးလျားသွားပါသတဲ့ . . . ၊ လူသား တစ်ယောက်တိုင်းရဲ့ သေဆုံးမှုတစ်ခုတိုင်းဟာ မိမိကိုနည်းပါး ပါးလျားသွားစေပါသတဲ့ . . . ၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မိမိဟာလူသားမျိုးနွယ်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်နေလို့တဲ့ . . . ၊ ဒါကြောင့်မို့လို့ အသုဘခေါင်းလောင်းထိုးသံ ကိုကြားရင် ဘယ်သူသေလို့ ထိုးတာလဲ လို့ မမေးပါနဲ့တဲ့ . . . ၊ ဘယ်သူပဲသေသေ မိမိအတွက် ထိုးတဲ့ အသုဘခေါင်းလောင်းသံ လို့ပဲ မှတ်ယူရန် ဖြစ်ပါသတဲ့ . . . ။
ဂျွန်ဒုန်းရဲ့ အင်္ဂလိပ် ကဗျာကို အောက်မှာ ပူးတွဲ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၂၃ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၆
By ကြျောဇောဦး ၊ (၂၃/၀၉/၂၀၁၆)
၂၀၁၂-ခုနှဈ ပွီးခဲ့တဲ့လေးနှဈကြျောကာလက ဂှမွို့ရဲ့ မွို့ခနျးမထဲမှာ ရခိုငျစာရေးဆရာ သုံးယောကျနဲ့ စာပဟေောပွောပှဲတဈခုလုပျခဲ့ပါတယျ။ ဆရာတျော အသြှငျပညာစာရ၊ ကြှနျတျော ကြျောဇောဦး နဲ့ ဆရာ မောငျလှိုငျ(လမု) တို့ ဟောပွောခဲ့ကွပါတယျ။
စာပဟေောပွောပှဲည ပွီးတော့ နောကျတဈနေ့ နလေ့ယျစာကို ဂှမွို့ပွငျတဈနရောက အဝေးပွေး လမျး ပျေါမှာရှိတဲ့ အိမျဆိုငျကလေးဖှငျ့ထားတဲ့ အနျအယျဒီခေါငျးဆောငျ ဦးညီပု (ယခု ရခိုငျပွညျနယျ ဝနျကွီးခြုပျ) တို့ မိသားစု ရဲ့ အိမျကုပျကုပျ ကလေးမှာ ရိုးရှငျးလှတဲ့ ရိုးရာ ထမငျးဟငျးအား အိမျသား တှကေ မတ်ေတာ စတေနာ အပွညျ့နဲ့ ထညျ့ခကျြထားတာကို စားခဲ့ကွပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့အဖှဲ့က ဆရာမောငျလှိုငျ(လမု) က (တဈခြိနျက)အနျအယျဒီ အမာခံတှေ ဆိုတော့ ဆရာမောငျလှိုငျ(လမု) ကို အကွောငျးပွုပွီး ထမငျးဖိတျကြှေးတာ ဖွဈပါတယျ။ ကြှနျတျောဆိုတဲ့လူက စကားနညျးသလောကျ ဦးညီပုက နှုတျဆိတျတတျပုံရလတေော့ ကြှနျတျောမှတျမိသလောကျဆိုရငျ တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ စကားတောငျ မပွောဖွဈခဲ့ဘူးလလေား လို့တောငျ ထငျမိတယျ။ ပွုံုးပွ၊ ထမငျးကို လကျဆေးစား၊ ကြေးဇူးတငျပါတယျလို့ နှုတျဆကျပွီး ပွနျလာခဲ့တယျ ထငျတာပါပဲ။ ဦးညီပုရဲ့ ဇနီးနဲ့ သမီးက ဖျောဖျောရှရှေနေဲ့ လိုလသေေးမရှိစရေ ဧညျ့ခံကြှေးမှေးခဲ့ပါတယျ။
ဒီနရောမှာ အဓိကပွောခငျြတာက အဲသညျအကွောငျးမဟုတျပါဘူး။ အဲသညျ စာပဟေောပွောပှဲမှာ ကြှနျတျော ပွောခဲ့တဲ့အကွောငျးအရာတှထေဲက တဈခုကို ထုတျနှုတျ ပွောပွခငျြတာဖွဈပါတယျ။
အဲသညျ ဟောပွောခကျြရဲ့ တဈနရောရာမှာ ရာဇဝတျပွဈမှုကြူးလှနျသူကို လူ့အဖှဲ့အစညျးက (ကွအေေးမှုကို လကျမခံဘဲ) ဘာကွောငျ့ တရားစှဲအရေးယူရသလဲ ဆိုတာကို အကွောငျး အလငျြးသငျ့လို့ ထညျ့ပွောဖွဈခဲ့တယျလို့ မှတျမိပါတယျ။ တဈခွားအကွောငျးအရာ တဈခုကို ပွောပွ ရငျးနဲ့ အဲဒါကို ရှငျးရှငျးလငျးလငျး ပွောဖွဈခဲ့ပါတယျ။
ဥပမာ ဆိုကွပါစို့။ လူတဈယောကျဟာ နောကျလူတဈယောကျကို သတျလိုကျတယျ ဆိုပါစို့။ အဲသညျအခါမှာ အသတျခံရသူရဲ့ မိသားစုက ပွီးသှားတာ ပွီးပါစတေော့ ငါတို့သားလေးလညျး ပွနျရှငျ လာတော့မှာ မဟုတျပါဘူး ဆိုပွီး ကွအေေးခငျြတယျ ဆိုတိုငျး ကွအေေး လို့ မရပါဘူး။ ပွဈမှု ကြူးလှနျသူဟာ လူသတျမှုကို ကြူးလှနျရုံမြှမက မိမိတို့ အသကျရှငျရာ လူ့အဖှဲ့အစညျးကိုလညျး ခွိမျးခွောကျလိုကျတဲ့ လုပျရပျကို တဈပွိုငျတညျးလုပျလိုကျရာ ရောကျပါတယျ။ ဒီလူဟာ လူသတျတာ သကျသကျ မဟုတျဘူး၊ . . . ငါတို့အားလုံးကို မထီမဲ့မွငျလုပျလိုကျတာလညျး ဖွဈတယျ၊ . . . ဒီလူကို ငါတို့ အရေးမယူရငျ ငါတို့အထဲက နောကျတဈယောကျယောကျ ဒီလိုမြိုးကြုးလှနျတာကို သူ့လကျခကျြ နဲ့ပဲ ဖွဈဖွဈ သူ့လိုလူလကျခကျြနဲ့ပဲဖွဈဖွဈ ငါတို့ခံလာရနိုငျတယျ၊ . . . သူ့ရဲ့လူသတျမှုဟာ ငါတို့ အားလုံးကို ခွိမျးခွောကျလိုကျတာပဲ ဖွဈတယျ . . . ဆိုပွီးတော့ လူ့အဖှဲ့အစညျးက သဘောထားပါ တယျ။ ဒါကွောငျ့မို့လို့ ဒီလိုပွဈမှုမြိုးတှမှော ကြူးလှနျခွငျးခံရသူ (victim) ကိုယျတိုငျကပဲ ဖွဈဖွဈ ကြူးလှနျခွငျးခံရသူရဲ့ မိသားစုကပဲ ဖွဈဖွဈ ကွအေေးခငျြတယျ ဆိုတိုငျး လူ့အဖှဲ့အစညျးက ခှငျ့လှတျလို့မရပါဘူး။ လူတဈယောကျကို သတျလိုကျတာဟာ လူ့အဖှဲ့အစညျးရဲ့ ကြူးလှနျသူရဲ့ နောငျ ထပျဆငျ့ ကြူးလှနျလာနိုငျခွေ နဲ့ အခွားသူမြားကလညျး အလှယျတကူ ကြူးလှနျလာနိုငျမယျ့ အလားအလာကို မြှျောတှေးပွီး လူ့အဖှဲ့အစညျးအကြိုးအလို့ငှာ မဖွဈမနေ အရေးယူဖို့ရာ စှဲခကျြတငျ တရားစှဲရပါတယျ။
ဒီလူသတျမှုအတှကျ လူ့အဖှဲ့အစညျးရဲ့ကိုယျစား နိုငျငံတျော (the state) က တာဝနျယူ တရားစှဲရပါ တယျ။ နိုငျငံတျောရဲ့ ကိုယျစား နိုငျငံရဲ့အစိုးရ (the government) က တရားစှဲရတယျ။ အစိုးရက ထပျဆငျ့ ခိုငျးစတေဲ့ တရားဥပဒသေကျရောကျစမှေု (law enforcement) ဆောငျရှကျရာ အဖှဲ့အစညျး တဈခုခု – ဥပမာ ရဲတပျဖှဲ့၊ အဲသညျ ရဲတပျဖှဲ့ကိုယျစား ရှာက ရဲစခနျးမှူး က တရားစှဲရတာ ဖွဈပါတယျ။ အဲသညျ တရားစှဲတဲ့ ရဲအရာရှိဟာ လူ့အဖှဲ့အစညျးကိုယျစား နိုငျငံကိုယျစား ပွဈမှုကြူးလှနျသူကို တရားစှဲရတာ ဖွဈပါတယျ။
လူတဈယောကျကို သတျလိုကျတာဟာ လူအဖှဲ့အစညျးရဲ့ အစိတျအပိုငျးတဈရပျကို သတျလိုကျ တာဖွဈတဲ့အတှကျ (အဲသညျလူ တဈဦးတညျးကိုသာမက လူ့အဖှဲ့အစညျးအပျေါ ကြူးလှနျရာ ရောကျ တဲ့အတှကျ ၊ တဈနညျးအားဖွငျ့ လူ့အဖှဲ့အစညျးကိုလညျး သတျရာရောကျတဲ့ အတှကျ) ကွအေေး ပွငွေိမျး အမှုရုပျသိမျးလို့ မရနိုငျပါဘူး။ လူသတျမှုနဲ့ အခွား အမှုကွီးတှမှော ကွအေေးပွငွေိမျး အမှု ရုပျသိမျးလို့ မရတာဟာ ဒီအခွခေံအတှေးအချေါ (concept) နဲ့ တညျဆောကျ ထားတဲ့ စနဈဖွဈပါ တယျ။
ဒီသဘောကို ၂၀၁၂ ဂှမွို့ စာပဟေောပွောပှဲ မှာ ကြှနျတျောပွောဖွဈခဲ့ပါတယျ။
ဒီကနေ့ ဖွဈပကျြနတေဲ့ အငျးဝအပျခြုပျဆိုငျကိစ်စမှာ ကော့မှူးမွို့နယျက (ကရငျလား ဗမာလား မသိ ရတဲ့) လူမမယျမိနျးကလေးနှဈဦး ကြှနျပွုနှိပျစကျခံရတဲ့အခါ ကြှနျတျောအပါအဝငျ လူ့အဖှဲ့အစညျး တဈရပျလုံးရဲ့ နှလုံးသားမှာ နာကငျြပါတယျ။ တရားမြှတမှုကိုမရတဲ့အခါ လူ့အဖှဲ့အစညျးဟာ ဒေါသ ထှကျပါတယျ။ ဖွဈသငျ့ဖွဈထိုကျတဲ့ တရားမြှတမှုကို တောငျးဆိုကွပါတယျ။ လူ့အခှငျ့အရေး ကျောမရှငျက ကွားဝငျညှိနှိုငျးပေးလို့ ငှေ သိနျးငါးဆယျနဲ့ ကွအေေးလိုကျရမယျ့ကိစ်စမြိုး မဟုတျပါဘူး။
ရာဇဝတျမှုတှနေဲ့ ပတျသကျလာရငျ လူ့အဖှဲ့အစညျးက ခံယူဆောကျတညျထားတဲ့ အခွခေံ သဘောထား (concept) လေးကိုတောငျ နားမလညျတဲ့ မွနျမာနိုငျငံအမြိုးသား လူ့အခှငျ့အရေး ကျောမရှငျ က လကျရှိအဖှဲ့ဝငျတှေ ဖွဈကွတဲ့ အသကျကွီးရငျ့သူ ပုဂ်ဂိုလျတှဟောဆိုရငျ ဒီဥပဒေ အခွခေံသဘောထား (concept) ကို နှလုံးသားထဲကနေ သိနကွေတဲ့ သတငျးထောကျလူရှယျတှရေဲ့ မေးခှနျးတှအေောကျမှာ မရှုနိုငျမကယျနိုငျ ဖွဈကွရပါတယျ။ အလဲလဲအကှဲကှဲ ကရြှုံးတဲ့ သူတို့ရဲ့ သတငျးစာ ရှငျးလငျးပှဲမှာ သူတို့ဟာ လူ့အခှငျ့အရေးကိုကာကှယျသူ (champion of human rights) တဈယောကျဖွဈဖို့ရာ လိုအပျတဲ့ နှလုံးသားတှလေညျးမရှိကွောငျး၊ အလုပျရဲ့သဘောသဘာဝက တောငျးဆိုတဲ့ ပညာရှငျပီသတတျပှနျမှု (professional competency) လညျးမရှိကွောငျး ပျေါလှငျ သှားခဲ့ပါတယျ။
အမြိုးသားလူ့အခှငျ့အရေးကျောမရှငျရဲ့ ဥက်ကဋ်ဌ ဦးဝငျးမွကို အဲသညျနကေ့ သတငျးစာ ရှငျးလငျးပှဲမှာ အရှကျတကှဲ ဖွဈကွတဲ့အထဲမှာ မမွငျလိုကျရပါဘူး။ အိမျအကူ ကလေးတှေ ခံစားခဲ့ရတာတှေ (နဲ့ မွနျမာ့လူ့အဖှဲ့အစညျး ရဲ့ဂုဏျသိက်ခာ) ကို ငှကေပျြ သိနျးငါးဆယျ နဲ့ ခြိနျခှငျလြှာမြှနိုငျတယျ လို့ အတှေးရောကျတတျသူ တှရှေိ နတေဲ့အတှကျ၊ ရခိုငျလူမြိုး(နဲ့ မွနျမာနိုငျငံရဲ့အခြုပျအခွာအာဏာ) ကိုလညျးပဲ သိနျးငါးဆယျ လိုမြိုး ပေါပေါလောလောတဈခုနဲ့ အခြိနျအတှယျညီမြှမှုရှိတယျ လို့ အတှေးမရောကျကွဖို့ရာကို မြှျောလငျ့ ဆုတောငျးရပါတယျ။ ဆရာကွီး ဦးဝငျးမွဟာ ရခိုငျပွညျနယျဆိုငျရာလလေ့ာရေးကျောမရှငျရဲ့ အဖှဲ့ဝငျ တဈဦးလညျး ဖွဈပသေကိုး . . ။
အိမျအကူ ကလေးတှအေတှကျ တရားမြှတမှုရရှိဖို့ရာ ဆောငျရှကျသူ Myanmar Now က သတငျးသမား ကိုဆှဝေငျးရဲ့ ဂုဏျရညျနှဈခုကို မွငျတှနေို့ငျပါတယျ။ ပထမဂုဏျရညျက taking sides တဈဘကျဘကျမှာ ရှေးပွီး ရပျတညျတာ၊ အဖိနှိပျခံတှဘေကျက ရပျတညျတာ။ ဒုတိယဂုဏျရညျက Going out of his way to help somebody ကူညီနိုငျဖို့အတှကျ ကရိကထခံအားထုတျတာ ဖွဈပါတယျ။ အဲသညျ ဂုဏျရညျတှေ၊ အဲသညျ ဂုဏျရညျတှကေို ဖွဈပျေါစတေဲ့ နှလုံးသားမြိုးတှကေို လူ့အခှငျ့အရေးကျောမရှငျ လူကွီးတှမှော မရှိကွတာကို ဝမျးနညျးစဖှယျတှမွေ့ငျခဲ့ရပါတယျ။
အိမျအကူ ကလေးတှရေဲ့ ကောမှူးမွို့နယျကို ကြှနျတျောတဈကွိမျရောကျဖူးပါတယျ။ ၂၀၁၂ ကွားဖွတျ ရှေးကောကျပှဲ မတိုငျခငျတဈရကျနမှေ့ာ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ ယှဉျပွိုငျတဲ့ ကော့မှူးမွို့နယျထဲမှာ ကြှနျတျော ရှိနခေဲ့တယျ။ မဲပေးတဲ့နေ့ နောကျတဈရကျမှာ ရနျကုနျကိုရောကျတယျ။ အဲသညျနေ့ ညကားနဲ့ ရခိုငျပွညျနယျ တောငျကုတျမွို့ကို သှားပါတယျ။ အဲသညျမှာ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ နရောပေါငျး နှဈဆယျကြျော ဟောပွောတဲ့ စာပဟေောပွောပှဲခရီးစဉျကို စပါတယျ။ ရမျးဗွဲ၊ ကြောကျဖွူ၊ တောငျကုတျ၊ သံတှဲ၊ ဂှ မွို့နယျတှထေဲက နရောပေါငျး နှဈဆယျကြျောမှာ ဟောပွောခဲ့တယျ။ နောကျဆုံး ဟောပွောတာကတော့ အခုနကပွောခဲ့တဲ့ ဂှမွို့ထဲက မွို့ခနျးမမှာ ဟောပွောခဲ့တဲ့ပှဲ ဖွဈပါ တယျ။ အဲသညျ ဂှမွို့ဟောပွာခကျြထဲမှာ ရှကေ့ပွောခဲ့တဲ့ လူ့အဖှဲ့အစညျးက ပွဈမှုကြူးလှနျသူကို မဖွဈမနေ အရေးယူရတဲ့ သဘောတရားကို ထညျ့သှငျးပွောပွဖွဈခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
တဈယောကျယောကျအပျေါ ရာဇဝတျမှု ကြူးလှနျတာဟာ လူ့အဖှဲ့အစညျးတဈရပျလုံး အပျေါ ကြူးလှနျတာဖွဈတယျလို့ သဘောထားတဲ့အတှကျ ဒီရပျတညျခကျြကို အခွခေံပွီး မကွအေေးစတမျး အပွဈပေးရတာ ဖွဈပါတယျ။
ဆယျ့ခွောကျရာစု အင်ျဂလိပျကဗြာဆရာကွီး ဂြှနျဒုနျးရဲ့ နာမညျကွီးကဗြာ No man is an island မှာ ပွောထားတယျ။ လူတိုငျးဟာ (ကမ်ဘာ့)တိုကျကွီးရဲ့ အပိုငျးအစလေးတှလေိုပါပဲတဲ့ . . . ၊ မွတေဈစ ပဲ့ကလြို့ ပငျလယျထဲကို ရောကျသှားရငျ တိုကျကွီးဟာ နညျးပါး ပါးလြားသှားပါသတဲ့ . . . ၊ လူသား တဈယောကျတိုငျးရဲ့ သဆေုံးမှုတဈခုတိုငျးဟာ မိမိကိုနညျးပါး ပါးလြားသှားစပေါသတဲ့ . . . ၊ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ မိမိဟာလူသားမြိုးနှယျရဲ့ အစိတျအပိုငျး ဖွဈနလေို့တဲ့ . . . ၊ ဒါကွောငျ့မို့လို့ အသုဘခေါငျးလောငျးထိုးသံ ကိုကွားရငျ ဘယျသူသလေို့ ထိုးတာလဲ လို့ မမေးပါနဲ့တဲ့ . . . ၊ ဘယျသူပဲသသေေ မိမိအတှကျ ထိုးတဲ့ အသုဘခေါငျးလောငျးသံ လို့ပဲ မှတျယူရနျ ဖွဈပါသတဲ့ . . . ။
ဂြှနျဒုနျးရဲ့ အင်ျဂလိပျ ကဗြာကို အောကျမှာ ပူးတှဲ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
၂၃ စကျတငျဘာ ၂၀၁၆
Previous နှဈဖကျပွညျသူတှလေို့ ပွောကတညျးက ကနြျောတို့ စရှုံးနပွေီ – ဦးကြျောဇောဦး
Next ကဉျြတုတျခံဝံ့ မခံဝံ့